Ny filohan'i Nauru sy Palau dia nanao sonia ny ASA, fotoana iray vaovao hisian'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nauru Breaking News » Ny filohan'i Nauru sy Palau dia nanao sonia ny ASA, fotoana iray vaovao hisian'ny fizahan-tany
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Nauru Breaking News • Vaovao • Vaovao Mafana Palau • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Nauru sy Palau dia firenena mahaleo tena roa any amin'ny Ranomasimbe Pasifika atsimo.
Amin'ny fiaraha-miasa dia ho mora kokoa ny fidiran'ny mponin'i Nauru tsy ny Palau ihany, fa ny any Taiwan sy ny faritra hafa any amin'ny Oseana Pasifika lavitra.
Ny filoham-pirenen'i Nauru sy Palau dia nanao sonia ny fifanarahana serivisy momba ny serivisy (ASA) izay hahita ny fiandohan'ny dia eo amin'ny firenena roa mikronesiana sy ny sisa, ny 2 septambra.
The Filohan'ny Nauru Lionel Aingimea milaza ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fa ny fifandraisana lalina sy ny fisakaizana misy eo amin'i Nauru sy Palau, "fa ho an'ny faritra ambanin'ny tany Mikronesiana lehibe kokoa ihany koa."
“Tsy ny fifanarahana serivisy momba ny serivisy ihany no hanamafy ny fifandraisana eo amin'ireo firenena nosy roa tonontsika fa hanome fotoana iray hampitomboana tombony ara-toekarena ho an'ny tombotsoan'ny firenena iraisantsika.
"Nauru dia nanolo-tena hanatsara ny andraikiny amin'ny sehatry ny fitaterana zana-paritra, isam-paritra ary iraisam-pirenena," hoy ny filoha Aingimea.
Filoha Palau, Surangel Whipps, Jr, dia nilaza fa ny fireneny dia manantena ny andro hamerenana amin'ny laoniny ny serivisy an'habakabaka, nahatadidy tranga medivac tamin'ny 1987, Airanauru, namaly ny antso hampiasana ny sidina avy any Palau mankany Manila.
“Amin'ny maha fanjakana nosy kely sy any amin'ny ranomasina midadasika, iray amin'ireo zavatra… fantatray fa, raha tsy misy ireo fifandraisana ireo amin'ny any ivelany dia tena tafasaraka isika, ary matetika isika dia eo am-pelatanan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy orinasa izay mety ny tombontsoany dia mety tsy mifanaraka amin'ny tombontsoantsika, "hoy ny filoha Whipps.
Nanampy izy fa ny fametrahana ny ASA dia fotoana iray ahafahana "miara-miasa amin'ny maha-mpirahalahy Pasifika" ary mahita ny Nauru Airlines ho mpitatitra mahomby sy hanatsara ny serivisy ho an'ny vahoaka.
Ireo mpitarika roa ireo dia manaiky ny fotoana azon'ny tsirairay atolotra amin'ny fampifandraisana an'i Azia, andrefana ary atsimo.
Mandritra izany fotoana izany dia manao fepetra an-trano i Nauru hanatsarana ny serivisy fampifandraisana an-dranomasina sy an-dranomasina.
Nohavaozina ny seranan'i Nauru hahatratrarana ny fenitra iraisampirenena raha ny fividianana fiaramanidina Boeing 737-700 an'i Nauru Airlines vao haingana kosa dia haharitra amin'ny fotoana sidina lava kokoa, hahatratrarana toerana lavitra.
Eo an-dàlam-panomanana ihany koa ny asa fanamboarana ny làlambe misy ny seranam-piaramanidina izay hanamafisana ny fiarovana sy ny fanarahan-dia ny fiaramanidina ary hametraka ny toeran'ny Nauru amin'ny fitomboan'ny asa fitaterana an'habakabaka amin'ny ho avy.
Ny fifanarahana dia milaza fa i Nauru sy Palau dia mahatadidy ny fifandraisana akaiky izay mamatotra ny firenena roa tonta, ary ny fanirian'izy ireo hanome drafitra ho an'ny fitantanana serivisy an'habakabaka.
Ny firenena roa tonta koa dia manaiky ny andraikitra stratejika amin'ny fitaterana an'habakabaka iraisampirenena amin'ny fampandrosoana maharitra ny toekarena nosy, ary indrindra amin'ny fampiroboroboana ny varotra, varotra ary fizahan-tany.
Ireo firenena roa ireo koa dia mahatsapa ny filàna fanatsarana ny haavon'ny, ny kalitao ary ny fahombiazan'ny serivisy fitaterana an'habakabaka anatiny sy ivelan'ny fireneny avy.
Ny Filoha Aingimea dia naneho fisaorana tamim-pahatsorana ny filoha Whipps tamin'ny anaran'ny governemanta tamin'ny sidina famindram-po vao haingana izay nitondra marary 34 sy naratra XNUMX avy any Nauru ho any Taiwan avy any Nauru miaraka amin'ny fijanonana ara-teknika kasaina hatao ao amin'ny Yap State noho ny famenoana solika.
Ny olana iray amin'ny famenoana solika dia midika fa ilaina mandritra ny alina ny ekipa mpandeha sy ny mpandeha ary i Palau, manana fitaovana ilaina amin'ny trano sy fiaramanidina, dia nanadio ny fiaramanidina sy ireo mpandeha vita vaksiny COVID hiantsona ary handany ny alina, talohan'ny diany nankany Taiwan.